လူသား ဘ၀ | Layma's World
Filed under: Personal, Tag, That's what I wanna say |
« လေးမနှင့် နာရီ ( ၂ ) ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက် … »
သားကြွက်, on July 14, 2008 at 9:32 pm said:
အယ်….ဘန်ကောက်ကိုပဲ လာမှာလားး သားကြွက်တို့မဲဆောက်လည်း စည်ပါတယ်ဗျ လာလည်လေ ဆရာ နဲ့ကျနော် ကောင်းကင်ကြီးကို ဘီယာ မူးအောင်တိုက်ပေးမယ် 😛 တီကြွက် အတွက်တော့ သောင်ရင်းမြစ်ထဲက ငါးကြီးကြီးတစ်ကောင် ဆင်းဖမ်းပေးမယ် 🙂
MhawSayar, on July 14, 2008 at 10:03 pm said:
ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ. “စာရေးချင်တယ်… စာရေးဆရာ မဖြစ်ချင်ဘူး..” ဆိုတာဟာ အတ္တမကြီးတဲ့ သူတွေ ထားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့… (တစ်ဖက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် လွတ်လပ်စွာ နေရခြင်းကို ကြိုက်တာလို့လည်း ပြောလို့ရမယ် ထင်တယ်. )
ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာအောင် ရေးတတ် ပါပေတယ်ဗျာ… အတွေး စတွေ ဖြန့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မ.ရေ.. 🙂
ပြီးတော့ ဒီလို လူမျိုးတွေဆီက ဒီလို ယူဆချက်တွေ ကိုသိခွင့်ရအောင် အစဖော်ပေးတဲ့ ကိုသင်္ကြန်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးပါ။ 😀
ဝေလေး, on July 14, 2008 at 10:47 pm said:
mtj, on July 14, 2008 at 11:47 pm said:
soemoe, on July 15, 2008 at 12:05 pm said:
နဲ့ ကိုပြည့်စုံနေပါပီ.. 🙂
ညိမ်းညို, on July 15, 2008 at 7:53 pm said:
(ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေက အစားအသောက်နဲ့ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်…။) တဲ့ 🙂
ညိမ်းညို, on July 15, 2008 at 7:54 pm said:
အဇ္ဈတ္တပြခန်း, on July 15, 2008 at 11:21 pm said:
ကြည်နူးစရာပဲဗျ အတွေးတွေက လတ်ဆတ်နေတယ်….. စိတ်ကူးထဲမှာ ဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေလဲထဲ့ထားတယ်နော်.. ခွေးအကြီးစားသုံးကောင် ဆိုလို့ နည်းနည်းလန့်သွားတယ်.. ဘယ်နားကများထွက်လာမလဲလို့…
မွန်, on July 16, 2008 at 7:56 am said:
Anonymous, on July 16, 2008 at 12:17 pm said:
chaos, on July 16, 2008 at 12:24 pm said:
စကားမစပ်…shopping ထွက်ရင်ထော်နော်။ ချန်မထားနဲ့ဦး။
nhn, on July 16, 2008 at 5:47 pm said:
လေးမ….နောက်ဆို မြစ်ဆုံ က ဘာလို့ မရှိတော့မှာ လဲဗျ….တိမ်ကောသွားလို့လား…..ခွေးတော့ မွေးချင်သား….ခြံနဲ့ နေနိုင်မှပဲ မွေးနိုင်တော့မှာ……ပြောရင်းဆိုရင်း မြီးတို ဆိုတဲ့ ခွေးမလေးကိုသတိရလာပြီ
ဗျာ….ကျောင်းတက်တုန်းက ခြောက်လသမီးလေး…..ခုတော့ဆုံးသွားရှာပါပြီ…..ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ် ပတပ်ရပ်ရပ် ပြီးတက်တာ….အင်္ကျီ မှာ သူ့ ခြေရာလေးတွေထင်လို့…….မွေးရာပါ အမြီးမပါဘူးဗျ….သမီးလေးက…..
nu-san, on July 16, 2008 at 11:09 pm said:
လေးမပြောထားမှပဲ အမလည်း ပြန်တွေးလိုက်ဦးမယ်.. အခုတော့ ညီမလေးရဲ့ လူသားဘ၀အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားချက်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ မြစ်ဆုံက ဘာလို့မရှိတော့မှာတဲ့လဲ။ အမလည်း အဲဒီကို ရောက်ဖူးချင်နေတာ.. ဂျပန်လာလည်မယ်ဆို always welcome ပါနော်..အဲ အမ ရှိတုန်းလာပေါ့နော်.. 🙂
ShwunMi, on July 18, 2008 at 8:08 am said:
မိ, on July 18, 2008 at 11:46 pm said:
ှSparrow, on July 19, 2008 at 10:57 pm said:
နှင်းပွင့်ဖြူလေး, on July 20, 2008 at 10:47 am said:
ွှံTHS, on July 21, 2008 at 4:59 pm said:
Synchro305, on July 24, 2008 at 10:23 am said:
မျှားပြာ, on July 28, 2008 at 1:08 am said:
မင်းကျန်စစ်, on July 28, 2008 at 10:45 am said:
လာလည်ရင် အစားနဲ့ ကြိုမကြိုတော့ မသေချာဘူး အသောက်နဲ့တော့ ကြိုပေးမယ် 😀
lay-ma, on July 31, 2008 at 11:23 pm said:
>သားကြွက် … လေးမ ငါးမစားဘူး..။
>စိုးမိုးလေး.. သိမှာပါ… သိပါတယ်… သိနေတယ်နော..။
>ညိမ်းညို … နောက်မှ လခမထုတ်ရသေးလို့အစ်မရယ်လို့မပြောနဲ့ ..။
>ကိုပြခန်း.. အဟဲ.. ထမင်းလာမစားရဲအောင်… ဒီလို ပဲ ဖိန့်် ထားရတာ.. ။
>မွန် …… ခုချိန်ထိ မသေချာသေးဘူး.. ညီမ..
လောလောဆယ်တော့ … အင်း မွန်ရယ်… ပို့ စ်တစ်ပုဒ် ရေးပြပါ့မယ်..။
>ခေးရော့စ်.. ခေါ်မှာပေါ့.. ပီကေမပါကြေးနော်… ပီကေ၀ါးပြီး ရှော့ပင်းမထွက်နဲ့လို့ ပြောတာပါ…။
>ကိုညိုထက်.. မြစ်ဆုံမှာ တမံဆောက်တော့မှာ.. တဲ့..။ သံယောဇဉ်ဆိုတာ နည်းလေကောင်းလေပါ…။
>မနုစံ… အပေါ်မှာ ဖြေထားတယ်နော်… မ.. ရှိတဲ့ နေရာ လာလည်မယ်..။
>မီ.. တစ်ခါတစ်လေ သိတယ်ထင်ပေမယ့် မသိဘူး.. မသိသလိုနဲ့ လည်း သိတာတွေ ရှိတယ်.. ဘာပဲပြောပြော ရွေ့ နေတယ်ဆိုတော့ တနေရာတော့ ရောက်မှာပေါ့…။
>မိ.. နင်ပြောတာကို ငါ.. ကျေနပ်ခဲ့ပေမယ့် … အဲဒီအတွက် လူဖြစ်ရတာတန်တယ်လို့ငါပြောမိရင် ငါ့ကိုယ်ငါ ထရိုက်မိလိမ့်မယ်..။ 😛
>sparrow… စာကလေးရော .. လူဖြစ်ရတာ တန်ပြီလား..။
>တင့်ထူး.. ဟဲ.. ဟဲ.. တကာ ပေါ်ပြီ.. ဒကာပေါ်ပြီ…။
>မျှားပြာ … 🙂
>ကျန်စစ်.. ရေ ပဲ တိုက်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား… သိပါတယ်.. သူတောင် ပိုက်ပိုက်မရှိလို့သူများဆီ ကပ်သုံးနေရတာဆိုတော့ … သဘောပေါက်ပါတယ်..။